Photos: Thousands of overjoyed protesters flooded Zimbabwe’s streets - Vanguard News
Home » News » News » Photos: Thousands of overjoyed protesters flooded Zimbabwe’s streets
On November 18, 2017 7:52 pmIn News, Photosby adekunleComments
Following the mass demonstrations, sources in the ruling ZANU-PF party confirmed to AFP that they would hold a crisis summit on Sunday to discuss removing Mugabe as president and party leader.
People hold an anti-Grace Mugabe placard during a demonstration demanding the resignation of Zimbabwe’s president on November 18, 2017 in Harare.
Zimbabwe was set for more political turmoil November 18 with protests planned as veterans of the independence war, activists and ruling party leaders called publicly for Zimbabwe’s President to be forced from office. / AFP PHOTO
Zimbabwean soldier points a placard reading “Mugabe must die” as Zimbabweans demonstrate to demand the resignation of Zimbabwe’s president on November 18, 2017 in Harare.
Tens of thousands of overjoyed protesters flooded Zimbabwe’s streets Saturday celebrating the crumbling of president’s ruthless regime, which had controlled the country for nearly 40 years. / AFP PHOTO
Thousands of protesters flooded Zimbabwe’s streets demanding Robert Mugabe’s resignation on Saturday in a movement organised by independence war veterans and backed by ruling party barons and the army. The mass turnout came after an unprecedented week which saw the army’s top brass seizing power and putting Mugabe under house arrest in response to his sacking of Vice President Emmerson Mnangagwa. / AFP PHOTO